GURYAHA DAWOOYINKA IYO KA HORTAGGA DABKA, MARKA LOO EEGO DHIRTA AYAA FAA'IIDO U LEH BINI-AADANKA - DHIRTA DAWOOYINKA
Kiriimku waa geedka sanadlaha ah wax yar ka badan nus mitir sare. Maqaalka waa mid toosan, caleemo khafiif ah oo leh cidhifyo jug leh. Waxa la barbar dhigaa horraantii Luulyo oo leh ubax yar oo shan gees ah oo midab cad ah, kaas oo sameeya dalladaha yaryar ee dlka-qaabeeya. Bishii Agoosto, dhirta ayaa dhajisey miro yar yar oo dhererkeedu yahay 3 mm oo leh caraf cad. Warshadu waa mid baahsan - waxay ku koreysaa Ameerika, Yurub, Bartamaha Aasiya iyo Caucasus. Anis waxay leedahay waxyaabo badan oo faa'iido leh oo leh waxyaabo ka hortag ah, waxaan uga sheekayn doonaa iyaga si faahfaahsan kadib.
Waxyaabaha kiimikada ee dabka iyo qiimaha nafaqada
Waxyaabaha ay ka kooban yihiin waxa ka mid ah: fosfooraska, kalsiyum, potassium, magnesium, zinc, manganese, copper, sulfur; folic acid iyo ascorbic acid, riboflavin, niacin, pyridoxine, thiamine.
Waa muhiim! Fikradda ugu badan ee nafaqooyinka ee miraha dabka.
Saliidda caanaha ah waxaa ku jira ketone daawada, anise aldehyde iyo anis acid.
Qiimaha nafaqada ee 100 g oo ah garaac: carbohydrates - 35.5 g, borotiinka - 17.7 g, dufanka - 15.8 g, halka qiyaasta kalooriga waa 337 kalori. Warshadu waxay leedahay qiyaasta kalooriga oo aad u sarreeya, maaddaama ay ka kooban tahay ka kooban saliidaha lagama maarmaanka ah iyo asiidh dufan.
Qalabka farmashiyaha ee dabka
Guryaha bogsashada ee dadka curyaaminta ah ee dadka caadiga ah ayaa muddo dheer la yaqaan. Anise waxay leedahay antispasmodic, anti-bararka iyo xayeysiinta, iyo sidoo kale saameyn bactericidal on xuubka xuubka ee mareenka neefta, waxay fududeeyaa sii daayo candhuufta. Waxaa loo isticmaalaa in lagu yareeyo xanuunka iyo garaaca kuleylka, sida diaphoretic. Xalka dareemaha iyo tincture waxay u dhaqmaan sida calool jilciye iyo daaweyn. Daawooyinka ayaa lagu dabaqayaa daaweynta kelyaha, beerka, mareenka caloosha iyo nidaamka urojiinta, madax xanuun, hurdo la'aan, iyo xanuunada dareemayaasha. Qodobbada waxtarka leh ee dabka ayaa si wanaagsan u saameynaya xalka dhibaatooyinka taagan. Waxaa la aaminsan yahay in dhirta la baabi'iyo wakiillada jinsiga daciifka ah ee cudurrada haweenka, iyo hagaajinta awoodda ragga.
Abuurka miraha leh waxay leeyihiin daaweyn qiimo leh oo qiimo leh, waxay daaweeyaan cudurrada caloosha, kelyaha, soo celinta shaqooyinka galmada, ayaa lagu dabiqi karaa xajinta xaakada iyo candhuufta, iyo inay kor u qaadaan urka afka.
Noocyada codsiga ee saliida dabiiciga ah waa mid ballaaran, waxaa loo adeegsadaa tarachardia, rheumatism, arthritis, qufac, neefta, rhinitis, cystitiska iyo dhagxaanta kilyaha, murqo xanuun, qoyaan, madax-wareer iyo madax-xanuun, menopause iyo walbahaarka. Saliidda dabka waxay xoojisaa bogsashada gubashada waxayna dagaaleysaa cirridka cirridka. Dufanka faraha badan iyo fedraalka ayaa kordhiya nuujinta haweenka nuujinaya.
Isticmaalka miraha dabiiciga ah ee daawada dhaqanka
Sababtoo ah qaabka kiimikada ee miraha dabiiciga ah ayaa bogsiinaya guryaha kuwaas oo fududeynaya koorsada cudurrada waxayna u oggolaanayaan in lagu daaweeyo iyada oo aan la isticmaalin daroogooyinka. Dhakhaatiirta dhaqameed waxay jecel yihiin in ay isticmaalaan anise daaweyn cuduro kala duwan. Miro waa qalab qiimo leh oo loogu talagalay maadooyinka elixirs ah, dhibco, saliida, tincture ammonia-anisic, iyo sidoo kale naasaha, caloosha jilciya, iyo shaah diaphoretic. Haddii ay suurtagal tahay, dooran miraha leh midab khafiif ah oo leh ari hodan leh, midab mug leh iyo ur ah in la yareeyaa ayaa soo jeedin kara in miraha ay yihiin kuwo waayeel ah ama lagu keydiyay xaalado aan habooneyn.
Ma taqaanaa? Saliida dabiiciga ah ee loo yaqaan 'Aromatic Anime' ayaa laga helaa isticmaalka habboon ee saabuun.
Cunnooyinka caanka ah ee laga helo miraha bogsiinta:
for hargab iyo dhuun xanuunka - ku kari miro miraha muddo 10 daqiiqo ah, filo maraq, ku dar 1 tsp. malab iyo caan ah.
qufac - 1 tsp. Miraha canabka ah, leyl, althea iyo budada cawska ayaa lagu shubay laba koob oo biyo ah karkarin, la qaado oo la qaadaa ilaa 4 jeer maalintii.
laga bilaabo cudurada mareenka mindhicirka - 1 tbsp. l Kiriim, kalluun, jamac, qamiis iyo gumeysi ku shub hal litir oo biyo ah, isku karsaar, kaddibna cab cabitaan nus koob 2 jeer maalintii.
laga bilaabo cudurka kalyaha - 1 tsp. miraha beeraha, juniper, dhir iyo ubaxa dooxada waxay soo dhajiyaan laba koob oo biyo karkar ah, ka baxsan laba saacadood, qaado nus koob 3 jeer maalintii.
Waa muhiim! Laguma talineyn inaad sii wadato daaweynta muddo ka badan hal usbuuc si looga fogaado dhibaatooyinka.
Shaaha ayaa ka soo baxday cawska la qalajiyey cawska ayaa laga helay isticmaalka sida macnaheedu yahay kicinta beeryarada iyo beerka.
Sidee loo adeegsadaa ansa oo ah kiknoolajiyada?
Ujeedooyinka quruxda leh, dabka ayaa loo isticmaalaa dhawaan, inta badanna hababka anti-gabowga iyo diyaarinta. Dareemidda dabka iyo saliida dabiiciga ah waxay kor u qaadaan nadaafadeynta lafdhabarta naqshadaha, nasashada murqaha wajiga. Saliida saliida leh waxaa lagu dari karaa kareemka, looska ama maaskarada.
Waxaan xiiso u yeeshay ugudhiga caadiga ah ee dabka iyo macmacaanka, waxay bilaabeen inay isticmaalaan dabeecadahooda dabiiciga ah oo si dabiici ahaan ah u soo saaraan soo saarida cadarka iyo nafaqada.
Isticmaalka dabka ee ujeeddooyinka culeyska
Cuntada si firfircoon u adeegso midhaha cannubka qaabka dhirta. Kudar ayaa lagu daraa bakeeriyada iyo alaabada wax lagu dubo, ee ilaalinta miraha iyo berry, diyaarinta hilibka iyo suugada iyo khudradda. Miraha dabiiciga ah waxaa loo isticmaalaa wax soo saarka maqaarka, sambuca, anisette iyo khamriga kale ee khamriga ah. Wadamada bariga, miraha dabiiciga ah waxaa loo isticmaalaa shaaha bakeeriga, si loogu isticmaalo hilibka iyo kalluunka, iyo diyaarinta saxamada miro.
Ma taqaanaa? Arkaeologists waxay cadeeyeen xaqiiqda ah in isticmaalka dabka loo adeegsado ujeedooyinka dawooyinka ee Masar, Rome iyo Greece.
Daawada: sida loo diyaariyo alaabta ceeriin ee caafimaadka
Dalagyada alaabta ceeriin ah waxaa la fuliyaa dhammaadka xagaaga, marka jirriddu ay noqoto mid jaale ah oo midabkeeduna soo noqnoqdo. Warshadda waa la gooyaa oo la joojiyaa qallajinta qolka madow. Ka dib qalajinta, faruuri ayaa lagu tumaa, nadiifinta miraha bogsashada. Alaabta ceeriin ee daawada ayaa lagu shubay weel xiran ama boorso daboolan oo lagu keydiyay meel qabow ah 2-3 sano.
Dhibaatooyinka iyo iska horimaadka dabiiciga ah
Qalabka daawada ee miraha iyo miraha dabiiciga ah waa caadi, laakiin waxaa jira waxyaabo ay ka horjoogsadeen isticmaalka. Gaar ahaan Isticmaal faruuqyo waa la mamnuucay:
carruurta ka yar 10 sano
inta lagu jiro muddada uurka,
ee cudurada joogtada ah ee habka dheef-shiidka,
iyadoo ay joogaan boogaha caloosha ama caloosha,
oo leh astaamaha kor u kaca,
oo leh xammilxumeyn shakhsiyadeed, xasaasiyad iyo dhibaatooyinka dermatological.
Dhibaatooyinka ay ka midka yihiin cuncunka xajmiga caloosha, xasaasiyadda alerjiga ee habdhiska neefsashada, finanka maqaarka ayaa dhici kara inta lagu jiro codsiga garaaca. Isticmaalka faleebo liddi ku ah dhiig-xinjirowga dhiigga ayaa laga yaabaa inuu saameyn ku yeesho.
Ka hor inta aanad bilaabin daaweynta miraha bogsashada ee dabka, la tasho dhakhtarkaaga isticmaalka geedkaan. Shaki yar oo ka mid ah jiritaanka fal-celinta xasaasiyadda ayaa u baahan in la sameeyo baaritaanka xasaasiyadda.